प्रिय मित्रहरु, तपाईंहरुलाई थाहा छ होला, अंग्रेजी शब्द चाइनाका २ वटा अर्थ रहेका छन् । एउटा अर्थ 'मेरो मातृभूमी चीन हो' भने अर्को अर्थ 'चिनियाँ माटोले बनाएको चीजबीज' । लामो समय अघिदेखि चीनलाई चिनियाँ माटोले बनाइएका भाँडा-वर्तन -- 'च छी' को मातृभूमि मानिंदैआएको छ । त्यसो भए चीन र च छी अर्थात् चाइना बीच के कस्तो सम्बन्ध छ त ? आज म तपाईंहरुसँग चाइनाको इतिहासबारे चर्चा गर्नेछु।
सामग्रीबाट प्रमाणित भइएको छ, चिनियाँ माटोको पहिलेको रुप प्राचीन छिङ च अर्थात् हरियो रंगका चिनियाँ माटोका भाडा हुन् । थाहा भएअनुसार, चीनको सबैभन्दा पुरानो छिङ चलाई चीनको शानसी प्रान्तमा पर्ने स्या अंचलमा रहेको लुङ शान सांस्कृतिक भग्नावशेषमा भेट्टाइएको थियो । त्यो प्राचीन छिङ च ४ हजार २ सय वर्षअघि बनाइएको थियो ।
वास्तवमा चीनमा पहिलो पटक देखा परेको च छी अर्थात् चिनियाँ माटोबाट बनाइएका भाँडा-वर्तन तोङ हान राजबंश (सन् २३-२२०)मा बनाइएको थियो ।
११ औं शताव्दीदेखि १३ औं शताब्दीको आरम्भसम्म चीनका थाङ र सोउङ यी २ वटा राजबंशकालमा चीनमा च छी बनाउने प्रविधि निरन्तर रुपमा विकसित हुंदैगइरहेको थियो । थाङ सान छाइ त्यस समयमा देखा परेको एक किसिमको रङ्गगीचङ्गी च छी हो । थाङ सान छाइले चिनियाँ चित्र, मूर्ति आदि कलाका विशेषताको उपयोग गरेर एउटा सामानमा एकै चोटी रातो, हरियो एवम् सेतो यी ३ वटा आधारभूत रङ्गको प्रयोग गरी उच्च तापक्रममा तताउँदा यी ३ वटा रङ्ग मिसिएर धेरै रङ्ग देखा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । थाङ सान छाइमा पहिलेका ३ वटा रङ्ग मिसिएपछि बनेका अन्य रङ्ग सबै देखा पर्न सक्नु थाङ सान छाइको विशेषता छ ।
मिङ राजबंश (सन् १३६८-१६४४) एवम् छिङ राजबंश (सन् १६४४-१९११) काल चीनमा च छीको उत्पादनको स्वर्णयुग थियो । त्यस बेला च छीको उत्पादन तथा उत्पादित बस्तुहरुको गुणस्तर निकै उच्च थियो । त्यति बेला चीनको दक्षिणी भागमा पर्ने शहर चीङ द चन च छीको नामले प्रसिद्ध शहर बन्यो र अहिलेसम्म चीनभरि सर्वोच्च गुणस्तरको च छी त्यसै शहरमा बनाइन्छ ।
अनि च छीबारे अरु देशका मानिसहरुले कसरी थाहा पाए त ?
च छी अर्थात् चिनियाँ माटोले बनाएका बस्तुहरुलाई ८ औं शताब्दीदेखि विदेशतर्फ निर्यात गर्न शुरु गरियो । तपाईंहरुलाई थाहा छ होला, त्यसअघि निकै प्रसिद्ध भएको सिल्क रोडबाट चीन र अरु देश बीच व्यापारिक तथा साँस्कृतिक आदान प्रदान शुरु भइसकेको थियो । त्यति बेला चीनलाई रेशम मुलुक भनिन्थ्यो । ८ औं शताब्दीपछि च छीलाई अरु देशमा निर्यात गर्ने क्रममा चीनले च छी अर्थात् चिनियाँ माटोले बनाइएका बस्तुहरुको मुलुकको नाममा विश्वव्यापी प्रसिद्धी कमाएको देखिन्छ ।
शुरुमा एशिया च छीको मुख्य बजार थियो । १७ औं शताब्दीको शुरुदेखि पश्चिमी मुलुकका राजपरिवारहरुमा च छीको संकलन गर्ने प्रवृति देखा पर्यो ।
अहिले विश्वभरी च छी अर्थात् चिनियाँ माटोले बनाइएका भाँडा-वर्तनहरु किन्न पाइन्छ । बेलायत एवम् युरोपेली महाव्दीपमा प्रचलित भइरहेकोले अंग्रेजी शब्द china पनि चिनियाँ माटोले बनाइएका बस्तुहरुको पर्याय बन्न गयो । जसबाट चीन तथा च छी यी २ वटा अर्थ फरक भएतापनि एउटै शब्दको प्रयोग गरिंदै आएको छ ।